Makwirirwo andakazoitwa na Ex-hubby yangu last Weekend – Vanoda Zvinhu
On May 23, 2016 March 1, 2018 By svirorist
Ndainge ndakarambana nemurume wangu asi tainge tine vana 3 vese vainge vakura vaitova kuprimary school.
kunyangwe tainge takasiyana hedu chinhu chataizama kuita kushanda tese kuti vanhu vedu vakure vachiziva kuti vabereki vedu vanotida saka taipota tichiita tuma family outing zvekuti vana vedu vazive kuti kunyangwe tisingagare tese but taigona kuyenda out tese. Inini and my ex tainge takazviudza kuti we have moved on ndaitonge ndine boyfriend but pa this time ainge ari out of the country for almost mwedzi wese meaning ndainge ndisina kumbonzwa mboro mandiri for almost a month.
Takayenda nevana kuMagaliesburg tichibva tabooker 2 rooms one yevasikana one for vakomana saka inini ndaizorara with my two kids.Ichokwadi panonzi munhu wawakambodana mukawana mukana futi munogona kusvirana. Ndakazama kuzvishingisa asi ndainge ndine mwedzi wese pasina anything ndakatobhofunga kuti pamwe pachanamirira ndikaita kavirgin futi asi ndainge ndakaburitsa vana 3 saka huvirgin hakuna.
Takafara tikatandara nevana kusvikira vasikana two vayenda kunorariswa nababa vavo since tainge tiri muroom yavo apa kamukomana kainge kachitobatwawo nehope zvekuti akabva ayenda kubedroom upstairs ndokurara isu tikasara takagara hedu. Chandaifarira ne ex yangu taiudzana straight, ndichibva ndamuti sha ndokumbirawo kuti undisvirewo please ndane almost mwedzi wese ndisina kunzwa mboro boyfriend haipo. Akabva aseka hake but ndaimuziva kuti haarambe aiziva kuti ndinokoira zvisingaite. Akabva ati saka unofunga tanga tichadzokera ndisina kurova zvinhu, tichibva taseka hedu.
Munhu akabva atosimuka paainge akagara ndokubva awuya pandiri ndokutanga kundibata bata zvidya zvinyoro nyoro zvekuti ndaibva ndanzwa ropa richimhanya kusvika mumusoro chaimo.Ininiwo ndokubva ndatanga zvandajaira ndakachidya ndikachisvisvina chimboro chake akaita kunge achamhanya bani, obva atanga kuti wandikuvadza kani ndanga ndakusuwa kani. Ndikambomira ndikati wakutofunga musikana wako uneni pano ndokusiya wakadaro, haa Dr ka, murume akachema chema zvikanzi ndanga ndichitaura iwewe mazwi ndiwo asina kubuda zvakanaka chete.
Akazosimuka ipapo ndokubva atanga nekumashure ndikanzwa achiti akanyudza oburitsa onyudza oburitsa ndikatanga kuti wakandirambirei kani ndichichema nekunakirwa iye paakabva ayita manyemwe ndokuita kuyibayirira mberi mberi ndichibva ndanzwa kabhinzi kakudairira ndikatunda zvekuti ndakanyatsonzwa kuti beche rainge razara juice ndokubva iye awedzera nekutunda kwake.Takabva tayenda kunogeza ndokubva ndarohwa rimwe round tichigeza ndokunzi number 3 tapedza kugeza.
PREVIOUS POST Previous post: Kukwirwa kwandakaitwa Murume wangu aripo
NEXT POST Next post: Threesome netumababie tumaSouth Africans kuno Joni!